Dhuguma hogganaan waraanaa duraanii Chaarles Teeylar mana hidhaati filannoo biyyattii micciiraa jiruu? - BBC News Afaan Oromoo
Dhuguma hogganaan waraanaa duraanii Chaarles Teeylar mana hidhaati filannoo biyyattii micciiraa jiruu?
Pirezidaantiin duraanii Laaybeeriyaa Chaarlis Teeylar yakka waraanaa raawwataniif waggaa 50n itti murtaa'ee mana hidhaa Biriteen keessatti argamu. Garuu, achi jiraachuu isaatti fayyadamuun filannoo biyya isaanii Kibxata taasifamu irratti harka seensisaa jiruu?
''Osoo har'a dhufa ta'e, silaa handaqii diimaa afeefi ture,'' jedha gidduugaleessa Laayibeeriyaa kan jiraatu Jastiin Lutar Kaasel.
Teessuma pilaastikii irra taa'anii biiraa unachaa waa'ee filannoo Laayberiyaa itti aanurratti sodaa qaban dubbatu.
Kuni A.L.A bara 1990'tti gidduugala fincila Chaarlis Teeylar ture. Buufanni waraanaa durii bosonaan liqimfamuus ammas bakka kanatti maqaan Teeylar guddaa dha.
Goodayyaa suuraa Buufanni waraanaa Chaarlis Teeylar duraanii Gibartaalaa argamu bosonaan liqimfamaa jira
''Osoo sagaleen qawwee jiraates jireenyi fooyyee qaba ture,'' jedha dargaggeessii biyyattiin waan lammiif barbaachisu mara akka hin goone qeequ tokko.
Kubbaa Miilaa fi Siyaasa
Qindoominni taphataan kanaan dura badhaasa taphataa waggaa jedhame badhaafame, Joorj Wihaa, yeroo sadaffaaf pireezidaantii ta'uuf dorgomaa jiruufi haatii waarraa duraanii Chaarlis Teeylar akka itti aanaa isaanii taatu filachuun shakkisiisaadha.
Kanaan dura bulchiinsa Teeylar fi gurmuu siyaasaaa isaanii Naashinaal Patriyootik paartii(NPP) jedhamu qeequu isaaniin beekamu maaliif akka kana godhan namuu sammuudhaa gaaffii qaba.
Goodayyaa suuraa Joorj Wihaa fi Jiiwal Howaard Teeylar waliin duula filannoof biyyarra naanna'aa turan
Qindoomuun gurmuu siyaasaa Joorj Wiihaa, Koongires for Dimookroatic Cheenj (CDC), akkasumas NPP osoo Chaarlis Teeylar sagaleen bilbilaan baatii Fulbaanaa guyyaa dhaloota isaaniitti deeggartootta isaaniif dubbachuun dura dhagahame.
Sagaleen Teeylar mana hidhaa eegumsa cimaa qabuu Yunaayitid Kingdam argamurraa dhagahame.
Dubbii isaanii keessatti ''qabsoon jireenya isaanii,'' akka ta'e dubbataniiru. Ummanni isaaniis akka gurmuu siyaasaa hundeessan hin ganne dhaamaniiru: ''Bakka duraatti osoo deebinee hunduu bareeda ta'a ,'' jechuun ummata isaanii gorsaniiru.
Haatii warraa isaanii duraanii addee Howaard jaarsa isaanii bira akka dhaabbatan ifa godhaniiru.
Duula booda gaazexessitoota miidiyaalee waliin taasisaniin biyyattiin 'ajandaa' yeroo Teeylar pirezidaantii turan lafa kaa'anitti deebii'u qabu jedhan.
Filannoo A.L.A bara 2017 irratti abbaan warraa isaanii duraanii dhiibbaa uumuu isaanii garuu sooba jedhu.
Tapha michummaa magaalaa guddoo ala booda BBC'tti kan dubbatan Joorj Wihaan mana hidhaati itti bilbilamu amanu.
Garuu, pirezidaantiin duraanii filannoo keessa harka qabaachuu ni haalu.
''Filannoo kanaaf Chaarlis Teeylar nu duulaa hin jiru,'' jedhu.
Haadha warraa duraanii Chaarlis Teeylar waliin qindoomina uumuu isaa yeroo gaafatamanis: ''Uummanni ishee jaallata. Isheen haadha biyyaati. Osoo Chaarlis Teeylar anaaf duulaa jira ta'e, qaata addunyaan gurra gahe.''
Goodayyaa suuraa Deggartoonni Teeylar Gibartaalaa argaman osoo hogganaan isaanii duraanii dhufe handaqii diimaa afuuf
Addunyaan garuu filannoo irratti harka seensifamu bareera. Yaadda'eeras.
Erga pirezidaantiin duraanii bilbilaan deegartoota isaaniitti dubbachuun isaa dhagahame booda kongirasiin Ameerikaa ''filannoo irratti harka seensisu'' kamiyyuu fi nama yakka waraanana himatameen ''mana hidhaatii filannoo qajeelchuu'' isaanii balaalessite jirti.
Ergamaan Gamtaa Awrooppaa Liibiyaatti argamu ibsa baaseen, pirezidaantiin Laaybeeriyaa kamiyyuu murtee darbe cabsuun Teeylar aangootti deebiisuuf akka hin yaalle jedheera.
Eeditarri gaazexaa Laayberiyaa Firoon Peej Afrikaa BBC'tti akka himanitti Wiyaah gargaaraa pirezidaantii Teeylar duraanii of biraa qabu.
''Addana hin jiru garuu namoonni duraan isa gargaaraa turan yoo filataman wanta baay'ee micciiruu danda'a,'' jedhan.
"Balaa kanarraa hafuun isaanii, akka waan haaraa dhalatanitti fudhanna"
'Dimookiraasii haaraan Zimbaabweetti mul'ate'
Barattuun qormaata hatte 'of-ajjeefnaan' barattoonni yunivaristii gubani
Hogganaan ONLF dabarfamee kennamuun 'seeraan ala'
Copyright © 2017 BBC. Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu Itti dhiyaachuu keenya gara geessituu